Fanamboarana - Tsarabika
Misy entana 11 isa.
Ho anao izay tia mikarakara voninkazo sy zaridaina dia ity ny ety na «sécateur » natokana ho amin’izany. Maranitra tsara ny lelany, ary tsy manimba tanana ihany koa ny tahony, fa malefaka tsara ary mora raisina. Mateza tsy mora samba ity fitaovana ity, ary natao mba aharitra ihany koa.
Ireto dia fitaovana natao indrindra mba hiaro antsika tsy hibolisatra ao amin'ny trano fidiovana. Malefaka ary manana kisary mahafinaritra izy ireto. Tena mora ampiasaina, ary mitazona tsara tsy mampianjera. Miendrika (dauphin) ary misy loko maro.
"Sécateurs" tena ilaina amin'ny fikarakarana ny vonikazo na ny zaridaina. Maranitra tsara, ary afaka manapaka ireo ratsana vonikazo rehetra. Mafy tsara izy ity, ary mora raisina ihany koa ny tahony. Fitaovana maharitra sy tsy mora simba.
Fitaovana ampiasaina any amin'ny trano fivoahana, mba manome endrika hafa indray ny WC-nao. "Abattant WC" misy sarisary, vita avy ami'ny plastika ary mafy tsara, sy manana loko mahafinaritra
Jiro "spiral" mitsitsy, mazava tsara nefa mampihena ny fandaniana herinaratra an-tokantrano.40W ny tanjany nefa mazava toy ny 150W
Jiro mitsitsy, mazava tsara nefa mampihena ny fandaniana herinaratra an-tokantrano.20W ny tanjany nefa mazava toy ny 100W
Robine azo atao anaty fidiovana, na koa lakozia mihaja sns.
Fitoerana taratasy ao amin'ny trano fisainana. Manome endrika ny ao anatiny.
Vita amin'ny aluminium mafy, Fiantonana lapoaly, sotrobe sy ireo fitaovana azo ahantona ao andakozia. Manamora ny fandaminana lakozia.
Manamora ny fikarakarana zaridaina, sy fanetezana bozaka. Azo hanapahana voninkazo ihany koa.